Gudoomiyaha Aqalka sare oo u safray Kenya – Kalfadhi
Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi Gudoomiyaha aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa barqanimadii maanta u safray dalka Kenya.
Waxaa la filayaa in todobaadyada soo socda uu furmo kulamadii senatarada aqalka sare iyo mid ka Golaha shacabka Soomaaliyeed maadama laga soo laabtay maalmihii fasaxa ee Ciida.
Gudoomiye kuxigeenka labaad ee aqalka sare mudane Mowliid Xuseen Guhaad oo goor dhow warbaahinta kula hadlay xarunta ay ku shiraan senatarada ayaa sheegay in muddo saacad wax ku dhow ay ciidamada AMISOM ay u diideen gudoomiyaha inuu Airport-ka Muqdisho uu galo gaar ahaan dhanka Madina Gate xiligaas uu tilmaamay in Gudoomiyaha ku wajahnaa dalka Kenya.
Mowliid Xuseen Guhaad ayaa shaaca ka qaaday in warqad ay ku dalbanayaan sida ay waxaan ku dhaceen iyo cida amartayba ay u direen Taliska AMISOM,goor danbe ayuu sheegay in Gudoomiye CabdiXaashi loo ogolaaday in dalka uu ka dhoofo.
AMISOM ayaa u sheegtay madaxda aqalka sare ee garoonka ka sagootinaysay Gudoomiyahooda CabdiXashi in aysan amar u haysan inay sii dayaan kaliya marka laga reebo 3-mas’uul uusan magacyadooda carabaabin.